 Nnọọ na webụsaịtị anyị Nnọọ na webụsaịtị anyị » Mkpuchi Mgbasa Ozi
Na Julaị 21, onye nta akụkọ ahụ bịara na Shaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Materials Co.
The ọlaọcha okokụre ngwaahịa na a dara luster, ụfọdụ bụ okirikiri akpa, ụfọdụ bụ iberibe akụkụ anọ. “Nke a bụ akụrụngwa ejiri na ngosipụta ekwentị Apple?”N'ịjụ ajụjụ onye nta akụkọ, Maazị. Qi Baoming, onye na -ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ, kpughere na ngwaahịa ndị ha rụpụtara na-esite na ọla ndị na-abụghị ọla na ọla ndị na-adịghị ahụkebe wee bụrụ ihe mkpuchi, nke bụ akụrụngwa maka mkpuchi mkpuchi ihuenyo. “Mgbe enyere ndị nrụpụta ihe ndị ọzọ, ha na -ekupụta akụrụngwa site na akụrụngwa, agbasara n'elu iko ahụ iji mepụta mkpuchi, na oyi akwa mkpuchi a, iko nwere ike igosi onyonyo a.”Maazị. Qi Baoming kwuru.
Iji mee mkpuchi mkpuchi nke akụrụngwa adịghị mfe, na mbụ, oke nke ọla ka ọ dị mma, gasification iji mepụta irighiri ihe dị mma na edo edo. Nke abuo, iji jikọta ọtụtụ ọla n'ụzọ zuru ezu, ọnọdụ okpomọkụ dịkwa oke egwu, oke ọkụ na oke oyi enweghị ike ịdị, obere njikwa ọjọọ ga -agbanwe steeti ahụ, na -emetụta mmetụta nke ngwaahịa emechara. Na mgbakwunye, ngwa dị na ngosi na iko ụgbọ ala, ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ, mkpa maka ụdị ọla dị iche iche, oke, okpomọkụ na teknụzụ dịkwa iche. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ etinyeghị oge dị ukwuu na nyocha nyocha na mmepe, ọkachasị inye akụrụngwa maka ngosipụta ekwentị Apple, ihe ndị a chọrọ siri ike, ha na -arụkarị ọrụ oge ọrụ oge maka nnwale, ọbụnadị ezumike anaghị ezu ike, naanị ịla n'iyi nke ihe bara uru karịa 100,000 yuan.
Maazị. Qi Baoming gwara ndị nta akụkọ na ụlọ ọrụ ahụ ejirila nwayọọ nwayọọ gbanwee bụrụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu kemgbe mmalite ya 2017, tumadi na -emepụta ebumnuche na -ekpuchi sputtering na vacuum nke tantalum, niobium, zirconium, hafnium, vanadium, nickel, titanium na ọtụtụ ọla, a na -ejikwa ngwaahịa ahụ na ụlọ ọrụ dịka enyo enyo, igwefoto, ihe ịdị ọcha, ngwaọrụ seramiiki, nnukwu iko, akụkụ akpaaka na fotoelectricity. “Ka anyị nwekwuo ike, anyị na -aga n'ihu na -eme nyocha na mmepe, na kemgbe e hiwere ụlọ ọrụ a, anyị nwere teknụzụ ihe eji eme ihe asaa nwere ikike.” E webatara Qi Baoming, “akwa ịdị ọcha niobium rotary target” teknụzụ patent bụ otu n'ime teknụzụ ha kacha mkpa, usoro nyocha niile na mmepe nnwale ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ. Onye ntaakụkọ mụtara na teknụzụ a na -ejikarị maka mkpuchi mkpuchi iko, dị ka teknụzụ gara aga si dị, mkpuchi dị nnọọ mfe imepụta irighiri ihe ndị buru ibu, ga -eme olulu iko, nke mere na ngwaahịa a niile ga -agbaji. Mgbe itinye teknụzụ a n'ọrụ, sputtering bụ ọzọ edo na okokụre ngwaahịa ọnụego na -amụba site 20%.
Shaanxi Zhongbei Titanium-Tantalum-Niobium Metal Materials Co., Ltd. na -adabere na teknụzụ nke ya na echiche nke njikwa ihe n'eziokwu, na iwu ngwaahịa mgbe niile yana nzaghachi dị mma sitere n'aka ndị ọrụ. A na -akọ na n'ime ụzọ atọ mbụ n'ime afọ a, ụlọ ọrụ ahụ anatala iwu karịrị otu narị yana ego ahịa ha ruru karịa 18 nde.
" Gbasara Anyị